Ideas de paleta de colores Isingeniso Sombala Palette
Isingeniso Sombala Palette
Amasu Ayi-Ruthless Colour Palette
Ngokuvamile, onsomi ihlotshaniswa nokuhlakanipha, ubuqambi, ukuzimela, umlingo kanye nemfihlakalo. Ukuba onsomi ngaphansi kolawulo lwethu (lobuciko) kubukeka sengathi bekunzima. Iseluleko esiluhlaza kwezempilo nemali, nopende sibonisa ukuhlakanipha, ubukhosi nokuhlonipha. Onsomi wami akusona onsomi yakho. Ngoba onsomi yakheka ngokuhlanganisa imibala efudumele nebandayo, igcina izakhiwo zombili. Umbala onsomi awuvamile ukwenzeka emvelweni futhi, ngenxa yalokho, uvame ukubonwa njengencazelo engcwele. Umbala onsomi wesibili (otholakala phakathi kobomvu nohlaza okwesibhakabhaka esondweni lemibala) kanye nama-grey grey ancibilikisa bobabili ubusika obuluhlaza nobushushu obufudumele.
Izinketho Zombala Ophezulu Wombala
Lapho usetha imibala, futhi abantu bazi ngomkhiqizo wakho, uvame ukukukhumbula lokho ngombala. Abantu abaningi bangasho ukuthi umbala oluhlaza okwesibhakabhaka umbala abawuthandayo. Njengoba ingumbala owuthandayo wabantu abaningi, ungakhanga izilaleli eziningi ngokushesha. Imibala ekhanyayo ilungele ingemuva ngombala omnyama kakhulu wombhalo uqobo. Iphelele imibala yemfanelo, ibiza ukwenza okuthile, noma lapho bafuna ukunakwa khona ngabantu. Ekugcineni, baqamba imibala egqamile kubonakala sengathi ayinandaba kangako.
Iphalethi lombala – INdaba
Ungayikhetha kanjani umbala ofanele wohlelo lwakho lokusebenza Ungayikhetha kanjani umbala ofanele wohlelo lwakho lokusebenza Ukubona imicabango yezithameli Ngenkathi eminye imibala inencazelo yendawo yonke, imibala eminingi inemibono ehlukile yendawo. Imibala yesicelo kumele ihambisane nokuqukethwe kohlelo kanye nenhloso. Umbala ongahambi kahle okusho kuhlelo lwakho lokusebenza ungaholela emiphumeleni emibi.
Ungaqala kanjani ngombala Palette?
Abantu babona umbala okokuqala, ngakho-ke konke okunye kuyinto yesibili. Vele, ufuna ukukhetha imibala oyithandayo. Umbala unokubonakala kokufakelwa okwenziwa ngaphakathi okwenza ukuthi ukuhlangana kwawo ngokwemvelo kukhululeke. Imibala ethile ingashintsha imizwa yethu, noma ithinte isimo sethu somzimba. Umbala wokupheleliswa ophelele nefilosofi uzoba ithuluzi lokuzithengisa lesicelo sakho.
Umlando we-Reed Colour Palette
Lapho izivakashi ezintsha zifika kubhulogi lakho, izinto zokuqala ezizichazayo yimibala. Sebenzisa umbala ukunika amandla ikamelo, indlu noma isakhiwo sehhovisi kuyindlela elula yokuthuthukisa amandla endaweni yakho futhi ikakhulukazi kuwe. Kusetshenziswe ngonembeza imisebe yokuqhaqhazela ngamabomu emhlabeni. Imibala yesithonjana sesicelo kufanele iveze ukusetshenziswa kwesicelo ngokuzwakalayo nangokucacile.
Ungayikhetha Kanjani Umbala Wephalette
Ukuvuselela iphalethi lakho lombala wasekhishini akudingeki ukuthi kube okubiza kakhulu. Iphalethi yombala ngokuyisisekelo ukukhetha kwemibala emi-2 noma engu-3 engasetshenziswa yonke indawo kumkhiqizo wakho. Iphalethi lethu lemibala libonisa umphambili ohlanganisiwe kuyo yonke imidiya, kufaka phakathi izinto eziphrintiwe, izinto zokuphromotha nezikhala ezikwi-inthanethi. Kufanele uchaze iphalethi lakho lemibala bese ukhawulela imibala kokuthathu. PONDTTESA Umbala wesekeli wombala uvunyelwe ukusetshenziswa okulinganiselwe.
Okulandelayo, ngizochaza izindlela okufanele uzisebenzise ukusebenzisa okokukhetha umbala wombala ngokulandelayo:
1. Qhafaza Khetha “Khetha isithombe sakho”, bese ukhetha isithombe ofuna ukusazi ikhodi yombala bese usilayisha.
2. Bhala igama lesithombe kwikholamu engenalutho, ngemuva kokuthi “Faka igama lesithombe”
3. Bese uchofoza ku- “Thumela”
Ngemuva kwalokho, ukulandelana kombala okuvelele, izibonelo zombala, imibala ye-hexadecimal, imibala ye-RGB namagama wemibala aphelele futhi ephelele etafuleni.
Kanjani?? Kulula, akunjalo?
Zama ukulayisha izithombe eziningi njengoba une. Futhi bheka imiphumela yenhlanganisela yemibala ekhiqizwe etafuleni. Isithombe osilayishile sizokhombisa yonke imibala evelele, umbala we-hexadecimal, umbala we-RGB kanye negama lombala.
Esta "Isingeniso Sombala Palette" el gráfico tiene 20 colores dominados, que incluyen . Hace una combinación de colores tan hermosa inspirada en esta imagen.